4 Askari oo ka tirsan Ciidamada Uganda ee Amisom oo lagu dhex dilay xerada Xalane. | XAL DOON
Home NEWS 4 Askari oo ka tirsan Ciidamada Uganda ee Amisom oo lagu dhex...
4 Askari oo ka tirsan Ciidamada Uganda ee Amisom oo lagu dhex dilay xerada Xalane.
Warar dheeraad ah, ayaa ka soo baxaya iska hor imaad Ciiidamada Uganda ee qeybta ka ah howlgalka Amisom ku dhex maray xerada ugu weyn ee dalka ay ku leeyihiin ee Xalane, halkaas oo ay ku geeriyoodeen 4 askari oo Amisom ah.
Sida wararka sheegayaan askari ka tirsan Ciidanka Uganda, ayaa toogtay Kormeerihiisa iyo laba askari oo kale, isagoo ugu danbeyntiina isaga nolosha is dhaafiyay oo uu isla goobta isugu dilay.
Toogashadan oo dhacday Sabtidii toodbaadkan ayaa intaasi oo dhan laga qarinayay Warbaahinta, wuxuuna gacan ka hadalka ka danbeeyay markii ay wada murmeen askariga dhimashada geystay iyo Kormeerihiisa.
Brig Richard Karemire oo ah Afhayeenka Ciidamada Uganda, ayaa xaqiijiyay dhacdadan, wuxuuna warka ku soo gaabiyay iney wadaan baaritaano la xiriirta sida ay arintan ku dhacday oo ah mid ku cusub Ciidamada Afrikaanta ah ee dalkan ka howlgalayay tan iyo 2007-dii.
Si kastaba, xerada Xalane ayaa saddexdii maalin ee u danbeysayba waxaa ka jira taag taag iyo in nin walba oo qirigiisa amaanka uu u furan yahay, iyadoo laga cabsi qabo in xili kasta uu iska hor imaad dhici karo.